Targus 15.6-inch Terra Laptop Backpack ~ ICT.com.mm
HomeTargus 15.6-inch Terra Laptop Backpack
Targus 15.6-inch Terra Laptop Backpack
Item Code: AC1350045 Color: Black Computer Compatibility Dimensions: 37 x4x 26 cm / 14.75” x 1.53” x 10.25” Dimensions: 32 x 17 x 46 cm 12.60” x 6.69” x 18.11”... [Learn more]
Brand: TargusFilter by: KMD, Laptop Backpack, USD
Item Code: AC1350045
Computer Compatibility Dimensions: 37 x4x 26 cm / 14.75” x 1.53” x 10.25”
Dimensions: 32 x 17 x 46 cm 12.60” x 6.69” x 18.11”
Targus အမှတ်တံဆိပ် Terra Backpack ဟာ 15.6” အရွယ်အစား Laptop တွေအထိကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ ကျစ်လျစ်ပေါ့ပါးစွာ ထုတ်လုပ်ထားပြီးသက်တောင့်သက်သာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်သလို Laptop ကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းမှ အပြင်သို့ ဆွဲထုတ်ပြီး ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်တဲ့ မိုးကာစ တစ်ခုနဲ့အောက်ခြေမှာ ရေစိုခံအထိုင်ပါဝင်တာကြောင့် ဆိုးရွားတဲ့ မိုးရာသီဥတုမှာ သင့်ရဲ့ Laptop ကိုရေစိုဒဏ်မှတဆင့် ရေငွေ့မရိုက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Laptop ထည့်သွင်းတဲ့အကန့်မှာ Laptop အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးကို စနစ်တကျကွက်တိ ထည့်သွင်းနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ရှေ့ဘက်မှာ ဒေါင်လိုက်အိတ်ငယ်တစ်ခုပါဝင်ပြီး စမတ်ဖုန်း၊ ပိုက်ဆံ၊ ကီးကတ် စသဖြင့်သင်အသုံးပြုနေကျ ပစ္စည်းတွေကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဘေးနှစ်ဘက်မှာတော့ ရေဘူး သို့မဟုတ်ခေါက်ထီးကို ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ အိတ်ငယ်နှစ်လုံး ပါဝင်ပါတယ်။ နားကြပ်ကြိုးကို အိတ်အတွင်းသို့ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက် အပေါက်ငယ်တစ်ခု ပါဝင်တာကြောင့် သွားလာနေရင်း သီချင်းလေးနားဆင်ဖို့အဆင်ပြေနေစေမှာပါ။ တောင့်တင်းတဲ့ နောက်ခံကိုယ်ထည်နဲ့ လွယ်ကြိုးက Backpack ကိုသက်တောင့်သက်သာနဲ့ သယ်ယူနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းလှပပြီး သင့်ရဲ့ Laptop နဲ့စာရွယ်စာတမ်းတွေ၊ Gadgets တွေကို ရာသီမရွေး အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အလန်းစား Laptop Backpack တစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
It's perfect foralaptop,atablet and all necessary cables and adapters. There arealot of pockets. The only downsides are that the pockets arealittle shallow. Things can drop out of them if moved sideway or upside-down. The rain cover isareally good addition to protect from the rain.
We really appreciate you for your4stars review and thank you for taking the time to write this review. We’re here for you anytime. We can’t wait to have you back at ICT.com.mm.